Soo-saareyaasha dufanka, Alaab-qeybiyeyaasha - Warshad dufanka Shiinaha
Tayada Sare ee Pressu daran ...
Petroking Tayo Sare Sare ...
PETROKING Qiimaha ugu Wanaagsan Lithiu ...
Petroking Anti-Xidho Hydraul ...
Saliida Saliida ee Naas-nuujinta ...
Gawaarida Gawaarida culus ee Petroking ...
Saliidaha saliida saliida saliida ...
Petroking Haydarooliga Transmi ...
Petroking Tayada Sare ee Cadaadiska Cadaadiska Xaddiga Xaydha Laydh Lithium Dufanka EP Dufanka
Saliida cadaadiska daran ee Petroking waa saliid macdanta ku saleysan, saabuun lithium oo dufan leh oo leh waxyaabo cadaadis saa'id ah lagu daro.
Petroking Dufanka Heerkulka Sare ee Tayada Sare HT ee Dhalista Baabuurta culus
Midab: BULUUS BULSHO
Heerkulka Shaqada: -20 --- 260
PETROKING Qiimaha ugu Fiican Lithium MP3 Dufanka Dheecaanka Dufanka Qoriga
PETROKING MULTIPURPOSE LITHIUM SAS GRY waa saliida macdanta ku saleysan, saabuun lithium oo dufan leh Tayada sare, dufanka ujeeddada guud waxay ku habboon tahay noocyo badan oo warshado iyo codsiyo baabuur ah oo u baahan dufan adag.
Saliida saliida ee saliida saliida ee 'Petroking' dufanka saliida ah ee saliida ah
Aluminium isku-buuqsan oo dufan leh.Waxay ka kooban tahay stearate aluminium ah sida dhumuc weyn iyo walxaha adag ee saliidda garaafka wanaagsan. Saliida waxay ka madax banaan tahay bitumen, biraha culus, dareeraha iyo alaabta ceyriinka ah ee ay kujirto koloriin, waxayna u ogolaaneysaa inay ku xirto meelaha khilaafku ka jiro xirashada si wanaagsan loo qeexay. Aluminium isku-buuqsan oo dufanku wuxuu yareeyaa dusha sare ee dusha sare wuxuuna hagaajiyaa tayada garabka ilkaha taas oo ka dhigaysa inay sidoo kale ku habboon tahay in la nadiifiyo saliidda haddii garbaha ilkaha waxyeello ka soo gaarto. Caabbinta biyaha ee wanaagsan iyo xasiloonida qiiqa ayaa ka dhigaysa mid ku habboon isticmaalka badda.
Saliida Saliida ah ee loo yaqaan 'Petroking White Lithium' oo leh Drop Point 200 ℃
Waxaa si ballaaran loogu isticmaalaa saliidaynta mashiinada iyo qalabka gawaarida gawaarida gawaarida iyo mashiinada kale ee beeraha iyo dhismaha sidoo kale waxaa lagu dabaqayaa qeybaha kale iyo qeybaha ubaahan sifaynta iyo wixii la mid ah.
Kala duwanaanta heerkulka dalabka: -20 illaa 120ºC, 150ºC muddada-gaaban.
Saliida Saliida ah ee loo yaqaan 'Petroking White Color Lithium'
Qaadashada dufanka cad ee Lithium waa saliid macdanta ku saleysan, saabuun lithium oo dufan leh oo leh xasilooni heerkul ah oo heer sare ah. Tayada sare, dufanka ujeeddada guud waxay ku habboon tahay noocyo badan oo warshado iyo codsiyada baabuurta ah.
Saliida Aluminium ee Petroking Aluminium 4.5kg baaldi Caaga ah
Saliida saliida ee saliida saliida ah ee loo yaqaan 'Petroking grease'
Saliida Saliida ee 'Calking Calcium Complex Dufan Furan'
Dufanka kaalshiyam-ka Anhydrous ee loo soo saaray in loogu isticmaalo nidaamyada saliidaynta iyadoo la adeegsanayo heerkul hoose ama dhexdhexaad ah. Dhirta kalsiyum-ka ee fuuq-baxa leh, oo ay weheliso astaamaha saliidda salka sare, waxay bixisaa caabbinta biyaha ee aadka u fiican iyo ku dhejinta meelaha dusha sare iyo sidoo kale waxyaabo aad u wanaagsan oo anti-duug ah.
Awood-badeed heer sare ah heerkul hoose ama dhexdhexaad ah.
U adkaysiga biyaha iyo ilaalinta daxalka.
Waxyaabaha wanaagsan ee ka hortagga dharka.
Ku xirnaanta dusha sare.
Saliida saliida ee 'Petroking Calcum' oo ku saleysan duubista caaga
Petroking Ep2 Ep3 Lithium Dufanka 17kg Pail
Dufan Cadaadis Xad dhaaf ah waa saliid macdanta ku saleysan, saabuun lithium oo dufan leh oo lagu daro waxyaabo cadaadis saa'id ah leh. Dufankani wuxuu siiyaa sifayn wanaagsan codsiyada guud ee lagu soo rogay xaalado adag iyo gariir.
Degenaansho farsamo oo fiican 、
Astaamaha aadka u wanaagsan ee ka hortagga 、
Waxqabadka wanaagsan ee EP
Petroking Excavator Dufanka Lithium Dufanka Ep2 Cartridge